आठ एसपी र २१ डिएसपीको सरुवा, काे कहाँ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more आठ एसपी र २१ डिएसपीको सरुवा, काे कहाँ ?
मंसिर २१ गते, २०७६ - १६:३२
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आठ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र २१ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)को काज सरुवा गरेको छ ।
मंसिर २१ गते, २०७६ - १६:३२ मा प्रकाशित